Tuug u dhacay Guriga Cristiano Ronaldo oo gacanta lagu dhigay & Wixii uu xaday oo kaa yaabin doona!! – Gool FM
Tuug u dhacay Guriga Cristiano Ronaldo oo gacanta lagu dhigay & Wixii uu xaday oo kaa yaabin doona!!
(Madeira) 10 Okt 2020. Tuug u dhacay Guriga Cristiano Ronaldo ee ku yaala jasiiradda uu ka soo jeedo ee Madeira ee dalkiisa Portugal ayaa gacanta lagu dhigay, iyadoo tuugan uu xaday alaab kaa yaabin doonta.
Shalay oo Jimce ahayd ayuu tuuggan u dhacay guriga xiddigii hore ee kooxda Real Madrid, Cristiano Ronaldo, isagoo gurigaas ka xaday alaab aan qiimo lahayd oo guriga u yaalay weeraryahanka Juventus.
Tuuggan ayaa doortay inuu xabsi u galo inuu xado maaliyadda kooxda Juventus oo uu saxiixay CR7, taasoo taalay guriga iyo alaabo kale oo aan qiimo u lahayn xiddiga xulka qaranka Portugal.
Warbaahinta Waddanka Portugal ayaa daabacday in Tuugga uu guriga ka galay Garaadka kaddib markii mid ka mid ah shaqaalaha guriga uu furay Albaabka garaashka, waxaana markii uu Tuuggan gudaha u galay guriga durba la qabtay.
Tuuga ayaa xatooyadiisa ka bilaabay Koofi uu lahaa Cristiano Ronaldo, kaddibna waxa uu qaatay Maaliyad Juventus ah oo uu saxiixay Kabtanka xulka qaranka Portugal.
Boliiska ayaa aqoonsaday tuugaan kaddib markii ay eegeen kaamirooyinka qarsoon ee ku xirnaa guriga taasoo sahashay in la soo qabto, waxaana Gurigaan uu yahay mid ay Ronaldo iyo qoyskiisa waqtiga fasaxa ku nool yihiin, inta badan marka uu CR7 helo fasax waxa uu isaga saaxiibtiisa Georgina iyo carruurtooda ay waqti ku qaataan gurigaan.
Waxa uu gurigaan ka kooban yahay 7 dabaq, waxaana uu leeyahay labo barkad oo kuwa dabaasha ah oo aad u waa weyn iyo garoon yar oo kubadda lagu ciyaaro, waxaana guriga ku nool Ronaldo hooyadiisa Dalores Aveira iyo walaalkiis ka weyn ee Hugo.
Yeelkeede, lama oga haddii Ronaldo Hooyadiisa iyo walaalkiisa ka weyn ay guriga joogeen markii uu tuugu u dhacay guriga oo xatooyada ka bilaabay, inkastoo markii dambe gacanta lagu dhigay.
Ronaldo markii ugu dambeysay oo uu gurigiisa ku yaala Madeira ku sugnaa waxa ay hayd bishii Maarso ee sanadkan 2020, markaasoo xiddigii hore ee Manchester United iyo Real Madrid uu gurigaas aaday markii mid ka mid ah xiddigaha ay ka wada tirsan yihiin kooxda Juventus laga helay caabuqa KOFID 19.